लालन-पालन Archives - Himal Sanchar
किशोरावस्थामा बच्चाको अटेरी स्वभाव : सानै उमेरदेखि दिनुपर्छ प्रशिक्षण
[ad_1] अक्सर यो देखिन्छ कि उमेर बढ्दै जाँदा बच्चाहरूमा पनि धेरै परिवर्तनहरू हुँदै जान्छन् । किशोर-किशोरीहरूले आफ्नै निर्णय आफैँले गर्न थाल्छ र तिनीहरूको स्वभाव अरूलाई अलिक अपाच्य हुन थाल्छ । किनकि उनीहरूलाई केही सम्झाउन लाग्यो कि रिSawanे र आफूभन्दा ठूलालाई अनेक तरिकाले गाली गर्ने गर्छन् । यदि तपाईं आफ्नो बच्चाको अटेरीपनाबाट आजित हुनुहुन्छ भने पनि… Continue reading किशोरावस्थामा बच्चाको अटेरी स्वभाव : सानै उमेरदेखि दिनुपर्छ प्रशिक्षण
Categorized as Lifestyle, किशोरावस्था, लालन-पालन
गर्मी मौसममा बच्चाको हेरचाहमा बिर्सन नहुने कुराहरू
[ad_1] गर्मी समयमा आफ्नो नवजात शिशुलाई कसरी रेखदेख गर्ने ? गर्मीमा बच्चाको लागि अनुकूल वातावरण कसरी तयार पार्ने भन्ने कुरा हरेक परिवारले जानिराख्नु जरुरी छ । किनकि प्रचण्ड गर्मी र तातो हावाले बच्चाको छालालाई सुख्खा बनाइदिन्छ । बजारमा पाइने महँगो उत्पादनको उपयोग गर्नुको साटो केही कुरामा ध्यान दिँदा घरमा नै बच्चालाई सुरक्षित र स्वस्थ राख्न… Continue reading गर्मी मौसममा बच्चाको हेरचाहमा बिर्सन नहुने कुराहरू
Categorized as Lifestyle, बच्चाको हेरचाह, लालन-पालन
[ad_1] पहिलो पटक आमा बन्दा बच्चासँगै आमाको पनि जन्म हुन्छ । बच्चा बच्चाको रूपमा जन्मिएको हुन्छ भने आमा संरक्षकको रूपमा आमाको भूमिकामा जन्मिने गर्छिन् । किनकि पहिलोपटक सुत्केरी हुँदा आमामा बच्चाको हेरचाह सम्बन्धी कुनैपनि अनुभव हुँदैन । नवजात शिशुको हेरचाह गर्दा धेरै सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । बच्चाको हेरचाहसम्बन्धी टिप्स त्यस्ता आमाको लागि जरूरी हुन्छ, जो… Continue reading नवजात शिशुको हेरचाहमा बिर्सन नहुने कुराहरू
Categorized as Lifestyle, लालन-पालन, लालनपालन
बालबालिकालाई कसरी पुस्तकमा अभ्यस्त गराउने ?
[ad_1] स्मार्टफोन, ट्याबलेट, ल्यापटप आदिको बढ्दो प्रचलनसँगै बालबालिकाको पठन संस्कृति पनि बद्लिएको छ । अहिले उनीहरु डिजिटल माध्यामबाटै पठनपाठन गर्न रुचाउँछन् । इन्टनेटको प्रयोगले यसलाई थप सहज बनाएको छ । कुनैपनि जिज्ञासाको हल खोज्न उनीहरु गुगलको भर पर्छन् । खोजेको कुराको नतिजा फटाफट आउने भएकाले बालबालिकाहरु यसैमा बढी तल्लिन हुन्छन् । यसको साइड इफेक्ट भने… Continue reading बालबालिकालाई कसरी पुस्तकमा अभ्यस्त गराउने ?
Categorized as Lifestyle, बालबालिका, लालन-पालन
[ad_1] सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ, बच्चालाई राति सुत्ने समयमा आमा बाबुसँगै सुताउने कि छुट्टै सुताउने ? गाउँघरमा बच्चालाई सँगै सुताउनुहुन्न भन्नेमा एउटा चर्चित उक्ति नै छ । विशेषगरी गाउँघरमा आमाबाबुको बीचमा बच्चालाई कहिलै पनि सुताउनुहुन्न भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर सहरी भेगमा यसबारेमा खासै चासो दिएको पाइँदैन । बच्चालाई आफूसँगै सुताउने कि नजिकै छुट्टै सुताउने… Continue reading बच्चालाई आमाबाबुसँगै सुताउने कि छुट्टै ?
Categorized as Lifestyle, लालन-पालन, सम्बन्ध
संवेदनशिल बच्चालाई कसरी हुर्काउने ?
[ad_1] कतिपय बच्चा यस्ता हुन्छन्, जो भावनात्मक रुपमा अत्यान्तै कोमल हुन्छन् । सानो कुराले उनीहरुलाई एकदमै दुःखी बनाउँछ, सानै कुराले अत्यान्तै खुसी पनि । उनीहरु छिटै विचलित हुन्छन् । स्पष्ट दृष्टिकोण भएको, अरुमाथि सहानुभुति राख्ने, प्रकृतिको सौन्दर्यप्रति आकर्षित हुने, संसारका अन्यायहरुको बारेमा जानकार र कसैलाई दुख परेको छ भने उसलाई सहयोग गर्ने मन भएका अति… Continue reading संवेदनशिल बच्चालाई कसरी हुर्काउने ?
Categorized as Lifestyle, लालन-पालन, संवेदनशिल बच्चा
नवजात शिशुको एक्लै ख्याल गर्नुपरे के गर्ने ?
[ad_1] नवजात शिशुको अबोधपनाले गर्दा उनीहरूलाई हामी स्वर्गदूत मान्ने गर्छाैं । जसले हाम्रो जीवनमा अनगिन्ती खुसीहरू ल्याउँछन् । अरुको बच्चाको भन्दा पनि यदि तपाईं आमाबुबा बन्नुभयो भने त्यसले तपाईंमा झनै धेरै खुसी प्रदान गर्ने गर्छ । अभिभावक बनिसकेपछि तपाईंको जीवन पहिले जस्तो नहुन सक्छ । त्यो यस अर्थमा कि तपाईं आफ्नो बच्चाप्रति बढी प्रेम गर्न… Continue reading नवजात शिशुको एक्लै ख्याल गर्नुपरे के गर्ने ?
Categorized as Lifestyle, नवजात शिशु, लालन-पालन
बालबालिकाहरु सामाजिक जीवनबाट कसरी विमुख हुँदैछन् ?
[ad_1] एकआपसमा दुखसुख साझेदार गरेर, सहयोग आदनप्रदान गरे, खुसी–उत्सव मनाएर, आपसी सद्भाव र सहकार्य गरेर बाँच्नुपर्ने हाम्रो नैसर्गिक स्वभाव हो तर, अहिले जो नयाँ पुस्ता छन्, उनीहरु सामाजिक जीवनबाट विमुख भइरहेका छन् । अहिले धेरैजसो घरमा एकल सन्तान हुर्किरहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा धेरै सन्तानलाई स्यहार्नु, हुर्काउनु, पढाउनु खर्चिलो एवं झन्झटिलो हुन्छ । जबकी एउटा… Continue reading बालबालिकाहरु सामाजिक जीवनबाट कसरी विमुख हुँदैछन् ?
Categorized as Lifestyle, लालन-पालन, सामाजिक जीवन
अभिभावकले गर्ने पाँच गल्ती
[ad_1] अविभावकहरू बच्चाको विषयमा प्रायः गल्ती गर्न चाहँदैनन् । जोकोहीलाई पनि आफ्नो बच्चाको भविष्य र उनीहरुको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । जानेर कुनै गल्ती गर्न नचाहे पनि नजानेरै पनि अभिभावकहरूले धेरै गल्तीहरू गर्ने गरेको देखिन्छ । बच्चाहरू कति सबल र चलाख बन्ने वा गलत संगतमा लाग्ने भन्ने कुरा अभिभावकहरूको ‘प्यारेन्टिङ सिस्टम’ मा निर्भर… Continue reading अभिभावकले गर्ने पाँच गल्ती
Categorized as Lifestyle, अभिभावक, लालन-पालन
बालबालिकामा डिप्रेसनको जोखिम
[ad_1] जब बच्चालाई डिप्रेसनले गाँज्न थाल्छ, उनीहरुमा अस्वभाविक परिवर्तन देखिन थाल्छ । उनीहरु एकोहोरो हुने, जिद्दी गर्ने, कहिले खानामा मन नै नगर्ने, कहिले औधी खाने, कहिले एक्कसी रमाउने, कहिले रिSawanे, झर्कने गर्छन् । बच्चाहरु स्वभावैले चञ्चल हुन्छन् । जिज्ञासु हुन्छन् । सानो कुरामा खुसी हुन्छन् । सानो कुरामा दुखी हुन्छन् । सुख, दुख सबैकुरा उनीहरु… Continue reading बालबालिकामा डिप्रेसनको जोखिम
Categorized as Lifestyle, डिप्रेसन, लालन-पालन